I-villa ye-colonial emangalisayo futhi evulekile w priv pool
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Marton
Uyemukelwa e-Casa de Arcos, isakhiwo esiyisisekelo esimaphakathi ne-Granada, e-Nicaragua. Lesi sakhiwo sisanda kulungiswa umndeni wethu wabangu-6 ovela e-Hungary, e-Europe - owathanda le ndawo ngenkathi unqamula amazwe aseMelika ukuze uthole ukuzijabulisa kwakho konke ukuphila. (okunye ngendaba yethu yomuntu siqu ngezansi)
Le villa ebanzi - elungele ukwamukela abantu abangafika kwabayi-8 ngokunethezeka - itholakala kalula enhliziyweni yeGranada, ngaphandle nje komsindo wedolobha eceleni komgwaqo, okukuvumela ukuthi ujabulele ubumfihlo futhi uphumule ngaphandle kwakho konke ukuphazamiseka kwethrafikhi yedolobha. Kunezici eziningi zikanokusho ezibalwe ngezansi ezingase zikukhumbuze ihhotela lezinkanyezi ezinhlanu kuphela ngaphandle kwaleyo ntengo yenani kanye nobunzima bamahhotela. Okuthokomalayo, okufakwe entengo i-pool yangasese, i-wifi enesivinini esiphezulu, amabhayisikili ongawasebenzisa, amanzi aphuzwayo, i-AC endlini yonke, amalineni aphambili namathawula, imidlalo yebhodi, izincwadi kanye nomoya wangempela wokuphumula wamakoloni. Umngane wethu, u-Julio, uzokwamukela lapho ufika futhi akunike amathiphu awusizo wokuthi yini ongayenza endaweni yonke yedolobha. Uzophinde akubheke ngesikhathi uhlala - angathintwa noma nini, futhi angahlela isevisi yokuhlanza nsuku zonke lapho uhlala khona ngaphandle kwezindleko ezengeziwe uma uyidinga.
Umndeni wethu uyakholelwa, futhi izivakashi zethu ziyasitshela, ukuthi i-Casa de Arcos isibe enye yezindlu ezinhle nenhle kunazo zonke edolobheni ngemva kokulungiswa kwakamuva. Siyazi ukuthi uzothokozela izinguquko esizenzile kanye nezikhala ezinkulu njengoba kuyinto enzima ukuyithola kwezinye izindawo eziqashiswayo eGranada – sikholelwe, siwenze umsebenzi oncomekayo! 
Isitayela samakholoni kanye nemininingwane ehambisanayo nakuba indlu inikeza i-ambiance efudumele. Uzothola indawo enkulu yegumbi lokuhlala enkabeni yendlu, indawo yekhishi negumbi lokudlela, indawo yengadi nedamu eyimfihlo ngokuphelele. Ngenhlanhla, amazinga okungcoliswa kokukhanya aphansi eGranada enza kube nokwenzeka ukuba nombono omangalisayo wesibhakabhaka ebusuku, ukubala izinkanyezi usuka echibini noma ukubuka ukuduma kwezulu kwaseNicaragua usofa onethezekile sekube yizinto eziyigugu neziyingqayizivele kithi esingathanda ukwabelana nawe ngazo kahle.
INDABA YETHU NOKUXHUMANA KULE VILLA
Siwumndeni wabangu-6 (uViki, uMarci kanye nezingane zethu ezi-4 ezinhle ezineminyaka engu-10, 8, 6 no-4) kusukela eHungary, eYurophu. Singabahambi, osomabhizinisi, ama-blogger, ababukeli abathanda ukuhlola umhlaba nezingane zethu. Phakathi nohambo lwethu olude lonyaka ongu-1, olugcwele ukuzijabulisa sinqamula amazwe aseMelika, sathandana nedolobhakazi kanye ne-Casa de Arcos futhi sanquma ukusithengela sona njengekhaya lesibili, futhi sililungise kabusha ukuze sijabulele ezinye izivakashi. kahle. Siyajabula ukukwazi ukwabelana nawe ngekhaya lethu futhi sizoqinisekisa ukuthi uzoba nesikhathi esihle futhi ujabulele i-Granada ngendlela esenza ngayo.
MAYELANA NGESIKHALA - IZICI, IZIKHUNGO
Le villa ebanzi inamandla okusingatha izivakashi ezingafika kwezi-8 ngokunethezeka. Ilungele imibhangqwana esanda kushada efuna ukubaleka kwezothando (ngokusebenzisa indawo ephansi kuphela), noma emaqenjini amakhulu afuna ukuhlanganyela isikhathi esimnandi ndawonye. Inamakamelo amathathu amakhulu, ama-ensuite amabili anezakhelwe ngaphakathi. Ngokungafani nezinye izindawo eziqashisayo endaweni, kunendawo eyanele yomthwalo wakho nempahla yakho futhi. Uzothola indawo yokubhukuda eyimfihlo, ehlaba umxhwele enezihlalo ze-hammock kanye nezihlalo ezinyakazayo, ikhishi elilingana kahle nelifakwe kahle kanye nendawo yokudlela lapho nonke ningakwazi ukuhlala ndawonye futhi nijabulele lokho okunikezwa yi-Casa de Arcos.
Umndeni wethu uthanda imininingwane yamaKoloni yale ndawo njengophahla oluphakeme, amathayela aphansi e-Nicaragua enziwe ngezandla, izinsika zekoloni eziqinile, uphahla lwamathayela abomvu kanye neminyango yamakhothamo eyingqayizivele esetshenziswa njengomhlobiso kulo lonke ikhaya. Amalambu nama-tile kwenziwe ngezandla kuphela ukuze kuhlobise lesi sakhiwo ukuze kusenze sibe uhlobo oluthile. Sikhethe ifenisha ngesandla futhi siqedele ukwengeza ubuntu obengeziwe kuyo.
Mayelana nesakhiwo, uzothola amakamelo okulala amathathu endlini. Esitezi esiphezulu kunamakamelo amabili okulala, elilodwa linombhede oyinkosi kanye nombhede olingana nendlovukazi, kwelinye kunombhede olingana nendlovukazi. Womabili amagumbi aphezulu ayi-ensuite (amagumbi okugeza angasese anendlu yangasese kanye neshawa exhunywe emakamelweni). Phansi kunekamelo lokulala elilodwa elinombhede olingana nenkosi.
I-AC kuwo wonke amagumbi, nokho ngenxa yesakhiwo esihle sesakhiwo cishe ngeke udinge ukusisebenzisa, noma kushisa ngaphandle. Amafeni osilingi angu-7 enza umoya unyakaze endlini yonke, ogcina ngisho nezindawo ezivulekile zimnandi futhi kushaya umoya ngezinsuku ezishisayo. Abalandeli bephansi elinyakazayo (elilodwa ekamelweni ngalinye) banikeza induduzo eyengeziwe. Sibeke amakhethini amnyama ekamelweni ngalinye ukuze anikeze ubumnyama ne-pece ngenkathi ulele noma uphumule ntambama. Sinelineni elisha sha, elisezingeni eliphezulu emibhedeni ukuze silale kahle ebusuku.
•Iphuli: Ichibi langasese: 5 kuya ku-6 amafithi ukujula, kanye namafithi angu-8 ubude, ngakho kungaphezu kwechibi lokucwilisa (izindlu eziningi eGranada zinamachibi amancane) alungele ukubhukuda futhi.
•2 amabhayisikili ahlinzekelwe izihambeli ngaphandle kwenkokhiso (izikhiya zamabhayisikili nazo zinikeziwe)
•Isevisi yokuhlanza ifakiwe enanini nsuku zonke njengoba kudingeka/njengoba iceliwe
•Izincwadi, imidlalo yebhodi
•Inethi lomiyane ngaphezu kwemibhede – uma kudingeka
•U-Julio, unogada wakho, otholakala 24/7 ezivakashini, futhi ongasiza ngezinto zokuhamba, izincomo zendawo, izinkambo, izimo eziphuthumayo, nanoma yini enye ongase uyidinge!
•Ukunikezwa kwamanzi: ithangi lamanzi okuphuza ahlanziwe angamalitha angu-5 anikeziwe (futhi agcwaliswa kabusha njengoba kudingeka) mahhala / ukufinyelela okuphephile emanzini ashisayo kubo bonke ompompi (akukho okunamathiselwe ekhanda leshawa kagesi) kodwa kuphela ngesifudumezi samanzi elanga, ngakho ngicela ungakunaki, ngezinye izinsuku kungase kwenzeke, ukuthi amanzi ashisayo awekho!
•Ukupholisa: I-AC, amafeni osilingi, amafeni aphansi anyakazayo, amakhethini amnyama
•I-inthanethi: isivinini esikhulu (6Mb/s) i-wifi
•I-TV: I-TV yesikrini esiyisicaba endaweni yokuhlala enamanye amashaneli amaningi, kodwa ungakwazi futhi ukuxhuma ikhompuyutha ephathekayo yakho ephathekayo ngentambo ye-hdmi futhi ubukele okwakho okuqukethwe – ukusuka echibini, noma ku-hammock
•Umculo: sikushiyele lapha isipikha sethu se-JBL esingenantambo ongasisebenzisa noma kuphi endlini.
•Ugesi: sine-converter engu-110/220V ewusizo kakhulu uma unomshini we-220V, kanye nepulaki yendawo yonke yesiguquli iwusizo kakhulu uma uhamba usuka ngaphandle kwenyakatho- namaphakathi Melika.
•Ukuvikeleka Nokuphepha: 3 amalambu akhanyayo angaphandle kanye nesango lensimbi elengeziwe emnyango wangaphambili ezivakashini ezifuna ukuvula iminyango yokhuni ukuze zithole umoya noma ukubona ukuthi kwenzekani ngaphandle kuyilapho zizizwa ziphephile futhi zivikelekile ngaphakathi (qaphela: indlu isendaweni ephephe kakhulu evuliwe. umgwaqo ongcono kakhulu e-Granada, kodwa sengeze lezi zinto ukuze sinikeze izivakashi eziqala ngqa ukuthula kwengqondo), isethi yosizo lokuqala enomuthi oyisisekelo, isicisha-mlilo
•2 isihlalo sojahidada samakhadi
•Ukudluliswa kwesikhumulo sezindiza kungahlelwa ngentengo evumayo kubavakashi bethu: 40$ kufika ku-3-4 isivakashi kanye no-70$ kufika kuzivakashi ezingu-7-8 (kuye ngokuthi usayizi womthwalo).
I-Casa de Arcos itholakala kalula ngamabhulokhi amabili ukusuka e-San Francisco Convent emgwaqeni onokuthula, ongenaso ithrafikhi kodwa amakhona angu-3 kuphela ukusuka esigcawini esikhulu sedolobha. Ukukhetha indawo efanele bekubaluleke kakhulu kithi ngesikhathi sokuzingela, ngoba ukuthola ikhaya elisendaweni emaphakathi kodwa kuyinselele eGranada. Imigwaqo yabahamba ngezinyawo kanye nemigwaqo engomakhelwane inomsindo uma amakamelo ebheke emigwaqweni, ikakhulukazi ngezimpelasonto. Imigwaqo emikhulu, ephithizelayo inomsindo ngenxa yesiminyaminya, ngisho nasebusuku. E-Casa de Arcos, yonke into ingafinyeleleka ngokuhamba kwamaminithi ambalwa kuphela, kodwa uma usekhaya, uzizwa sengathi ubusemhlabeni ohlukile.
Ikhishi eligcwele futhi elifakwe kahle elinomshini wekhofi (i-American ne-espresso kanjalo), i-blender, izinsiza zokupheka, ihhavini elinama-burners angu-6, i-oven microwave, amapuleti epulasitiki nezinkomishi kanye nokujabulela isiphuzo ngasechibini, ifriji enkulu eneqhwa elungisiwe.
Ukupheka ekhaya kungahlelwa abapheki abamangalisayo esingakuxhumanisa nabo.
Lapho singasebenzi endlini noma sisenza eminye imisebenzi, sijabulela ukuhambahamba ezimakethe zokudla, siphuza ijusi yewolintshi esanda kukhamiwa. Iseluleko sethu esiyimfihlo ukuthi uye kumtapo wolwazi waseSan Francisco Convent futhi uhlale engadini yayo enhle! Siyakujabulela ukuhamba echibini nezingane kanye nokugibela ibhayisikili, sizama izinkundla zokudlala ezinhle esizithola endleleni. Enye yezinto esizithandayo ngeSonto elivilaphayo ukujabulela ibhrantshi emnandi e-Garden Café nabangani. Ukuze uthole izincomo ngalokho okufanele ukwenze noma ukuthi uye kuphi, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi, siyajabula ukukusiza, kodwa u-Julio uzokunikeza ulwazi oluningi oluwusizo lapho ufika!.
4.74 ·78 okushiwo abanye
4.74 · 78 okushiwo abanye
Lapho singasebenzi endlini noma sisenza eminye imisebenzi, sijabulela ukuhambahamba ezimakethe zokudla, siphuza ijusi yewolintshi esanda kukhamiwa. Iseluleko sethu esiyimfihlo ukuthi uye kumtapo wolwazi waseSan Francisco Convent futhi uhlale engadini yayo enhle! Siyakujabulela ukuhamba echibini nezingane kanye nokugibela ibhayisikili, sizama izinkundla zokudlala ezinhle esizithola endleleni. Enye yezinto esizithandayo ngeSonto elivilaphayo ukujabulela ibhrantshi emnandi e-Garden Café nabangani. Ukuze uthole izincomo ngalokho okufanele ukwenze noma ukuthi uye kuphi, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi, siyajabula ukukusiza, kodwa u-Julio uzophinde akunike ulwazi oluningi oluwusizo lapho ufika!
Umngane wethu, u-Julio, uzokwamukela lapho ufika futhi akunike amathiphu awusizo wokuthi yini ongayenza edolobheni. Uzophinde akubheke ngesikhathi uhlala - angathintwa noma nini, futhi angahlela izinhlelo kanye nesevisi yokuhlanza nsuku zonke lapho uhlala khona ngaphandle kwezindleko ezengeziwe uma uyidinga.
Umngane wethu, u-Julio, uzokwamukela lapho ufika futhi akunike amathiphu awusizo wokuthi yini ongayenza edolobheni. Uzophinde akubheke ngesikhathi uhlala - angathintwa noma nini, f…
UMarton Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Deutsch, Magyar, Español